ZTE Blade A3Y waa taleefan miisaaniyadeed cusub oo leh Helio A22 iyo Android 10 | Androidsis
ZTE Blade A3Y waa taleefan miisaaniyadeed cusub oo leh Helio A22 iyo Android 10
ZTE wuxuu ku dhawaaqay qayb cusub oo ka mid ah qoyska Blade ee suuqa Mareykanka hoostiisa ka shaqeeya Yahoo! Moobayl, kaas oo xilligan sii joogi doona waddanka oo keliya. The ZTE Blade A3Y wuxuu noqon doonaa taleefan casri ah oo heer-gala ah taasi uma muuqato wax gaar ah marka laga reebo inay leedahay Android 10 nidaam ahaan.
Shirkadda Aasiya waxay soo uruurisaa qalab leh astaamo fulin doona howlaha aasaasiga ah ee isticmaaleha aan u baahnayn taleefan awood leh laakiin xasilloon. Inaad ku timaaddo qalab wax ku ool ah oo loo yaqaan 'MediaTek chip' wuxuu ballan qaadayaa ismaamul qiyaastii hal maalin ah.
1 ZTE Blade A3Y, wax walba oo ku saabsan terminalkan cusub
ZTE Blade A3Y, wax walba oo ku saabsan terminalkan cusub
El ZTE Blade A3Y Waa terminal laga fiirsado haddii aad rabto inaad wicitaano sameyso, isticmaal badan oo fariimaha deg dega ah iyo waliba wicitaanada fiidiyaha. A3Y wuxuu hirgaliyaa shaashad 5,5-inji ah oo HD + qaraar ah iyo kamarad hore oo 5-megapixel caadi ah.
Processor-ka waxsoosaarka tamarta badan ayaa loo isticmaalaa, xaaladdan soo saaraha Shiinaha wuxuu doortaa inuu ku rakibo 22 GHz Helio A2 afarteeda, 2 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo keyd ah. Bateriga wuxuu leeyahay awood dhan 2.660 mAh oo leh USB-C ku shubista iyo kuleylintu waxay qaadan doonaan wax yar saacad.
ZTE Blade A3Y wuxuu leeyahay hal kamarad gadaal 8-megapixel ah, midigta agteeda waxaad ku arkeysaa furaha akhristaha faraha oo wuxuu ku habboon yahay qaadashada sawirro hufan. Waa qalab 4G ah, wuxuu ku darayaa Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, minijack iyo dekedda USB-C. Nidaamku waa Android 10 oo leh lakabka ZTE ee waxqabadka sare.
ZTE BADAN A3Y
MUUQAAL 5.5-inch LCD leh HD + xallinta
PRORESOR MediaTek Helio A22 4-core 2.0 GHz
GPU Awoodda VR GE8320
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 32 GB
KAAMARKA DIBADDA 8 MP dareeraha ugu weyn
KAAMI HOR 5 MP dareeraha ugu weyn
BATARY 2.660 mAh nooca la saari karo
Isku xirnaanta 4G / Wi-Fi / Bluetooth 4.2 / USB-C / Minijack / GPS
Qiyaasaha iyo Miisaanka: 146 x 71 x 9.7 mm / 162 garaam
El ZTE Blade A3Y waa ikhtiyaar aad u xiiso badan maxaa yeelay waa mid dhaqaale badan, Maaddaama qiimaha uu yahay 49 doolar, oo ku saabsan 42 euro si loogu beddelo macaamiisha Yahoo! Macaamiisha wareega ama mustaqbalka. Waxay ku timaaddaa hal ikhtiyaar oo midab leh, oo midabkeedu yahay buluug kaas oo ah midabka caadiga ah ee Yahoo! waxaana laga heli doonaa saacadaha soo socda mobilka mobilada ee caanka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ZTE Blade A3Y waa taleefan miisaaniyadeed cusub oo leh Helio A22 iyo Android 10
OneOdio A10 iyo OneOdio Fusion A70 dib u eegista sameecadaha
ARPG Raziel oo Lagu Cusbooneysiiyay Halyeey Cusub, Nidaam Cusub oo Cusub, Hal-ku-dhigga Halloween, Iyo Inbadan